ဟာကြူလီအမြင့်နှင့်တန်ခိုးကြီးသော | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! ဟာကြူလီအမြင့်နှင့်တန်ခိုးကြီးသော | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
အားလုံးသည်သူ၏ဘုန်းအသရေအတွက်ကဒီမှာလာသောသူဂရိဒဏ္ဍာရီသူရဲကောင်းဟာကြူလီကနေမှုတ်သွင်း Hercules မြင့်မားခြင်းနှင့် Mightyis. ဤ PocketFruity အခြားရွေးချယ်စရာ ဂိမ်းအမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ပြီး, ကောင်းစွာ setting ဂရိတင်ဆက်. ဂိမ်းအပို features တွေနှင့်အတူ brimming ဖြစ်ပါတယ်.
သိပ္ပံနည်းကျအားကစားပြိုင်ပွဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထီနှင့်စည်းမျဉ်းဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထင်ရှားတဲ့ဖန်တီးသူဖြစ်ပါသည်. သူတို့ကလောင်းကစားရုံအကြောင်းအရာကြွယ်ဖြစ်ကြောင်းဂိမ်းများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းပညာဝါကြွားသည်. ဤ PocketFruity အခြားရွေးချယ်စရာ slot ကသူတို့ကိုအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်.
ဤ PocketFruity အခြားရွေးချယ်စရာ ဂိမ်းနှင့်အတူကစားသည်ကို5reels နှင့်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 100 paylines. The symbols complement the theme and are various characters from the Greek mythology. သူတို့ထဲကအကျိုးအရှိဆုံးသင်တစ်ဦး payline အပေါ်ငါးခုအဘို့သင့်ရှယ်ယာ 250x ပေးအပ်သောဇုအိုင်ကွန်ဖြစ်ပါသည်. လေးဖဲချပ်ဝေကဒ် icon များကသရုပျဖျောလေးနိမ့်တန်ဖိုးကို icon များရှိပါသည်. ဤအကြောင်းကိုအများဆုံးဒီကဗျာအရာ PocketFruity အခြားရွေးချယ်စရာ ဂိမ်းကနှစ်ခု reel အစုံပါရှိသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, သာမန်တဦးတည်းနှင့်မျက်နှာပြင်၏ထိပ်မှာတဦးတည်းတန်ခိုးကြီးသော Reel.
ဒီ၏အခြားအင်္ဂါရပ်များ PocketFruity အခြားရွေးချယ်စရာ ဂိမ်းတွေဟာ:
တန်ခိုးကြီးသော Reels- အဆိုပါ reels အပေါ်အပြည့်အဝပေါ်ထွန်းသုံးသင်္ကေတအဖြစ်အရပ်မြင့်သောတောရိုင်းတိုးချဲ့အဆိုပါ feature ကိုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်. မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာတန်ခိုးကြီး Reels ဝင်းဒိုးကိုနှစ်ဆ paylines အတူတက်ဖွင့်လှစ်. အဆိုပါရိုင်းထို့နောက်တစ်ခုလုံးကိုတန်ခိုးကြီးသော Reels ဝင်းဒိုးကိုဖြည့်ရန်ချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်.
အခမဲ့လှည့်ဖျား- သငျသညျမလိုအပ်ဒီ feature ကိုသက်ဝင်စေဖို့3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ. သငျသညျလကျခံ 8, 12, နှင့် 20 ဆင်းသက်များအတွက် 3, 4, နှင့်5လိုအပ်သလို. Mighty Reels will become active if you get evenapart of expanding wild anywhere in the view. အဆိုပါအင်္ဂါရပ်နေစဉ်အတွင်းသုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြဲဖြန့်ဆင်းသက်သည့်အင်္ဂါရပ် retrigger ပါလိမ့်မယ်.
Big လောင်းကစား Mode ကို- သင်ဒီမှာသုံး options များနှင့်အတူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်.
£ 20 နဲ့ Big လောင်းကစားထောက်ပံ့ငွေကိုသင်5တစ်ခုတိုးချဲ့ရိုင်းဆင်းသက်သည်တန်ခိုးကြီးသောသူ၏ Reels တက်ကြွဖြစ်လာစေသည်ဘယ်မှာ Big လောင်းကစား Spins.
£ 30 ရက် Big လောင်းကစားထောက်ပံ့ငွေကိုသင်5တစ်ခုတိုးချဲ့ရိုင်းဆင်းသက်သည်တန်ခိုးကြီးသောသူ၏ Reels အသက်ရှင်လျက်ဖြစ်လာစေသည်နှင့်အနိမ့်တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတဟာ reels ကနေဖယ်ရှားထားရာ spins.
£ 50 နဲ့ Big လောင်းကစားထောက်ပံ့ငွေကိုသင်5တစ်ခုတိုးချဲ့ရိုင်းဆင်းသက်သည်တန်ခိုးကြီးသောသူ၏ Reels အသက်ရှင်လျက်ဖြစ်လာစေသည်နှင့်အနိမ့်တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတဟာ reels ကနေဖယ်ရှားထားရာ spins. လည်း, သင်တစ်ဦးအနိုင်ရပေါင်းစပ်ခံယူတိုင်အောင်သော့ခတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ.
ဒါဟာ tastefully ပြုသောအမှုများနှင့်တိုးချဲ့အဖြစ်စေးကပ်လွင်ပြင်တိုးချဲ့ထံမှအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါသည်, အဆိုပါ optional ကို Big လောင်းကစား mode ကိုနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ.